नेपाल साफ च्याम्पियनशिपको सेमीफाइनलमा, विमल र नवयुगको गोल ! - नेपाल साफ च्याम्पियनशिपको सेमीफाइनलमा, विमल र नवयुगको गोल !
नेपाल साफ च्याम्पियनशिपको सेमीफाइनलमा, विमल र नवयुगको गोल !
२०७५, २३ भदौ, 02:56:50 PM
ढाका । नेपाल साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । शनिबार राती ढाकामा भएको समुह चरणको अन्तिम खेलमा घरेलु टोली बंगलादेशलाई २ शुन्य गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल सेमीफाइनल प्रवेश गरेको हो ।
नेपालको जितमा विमल घर्ती मगर र नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे । ३३ औँ मिनेटमा फ्रिकिकमा गोल गरेका विमल घर्ती मगरले पहिलो हाफमा नेपाललाई १ शुन्यको अग्रता दिलाएका थिए ।
स्टार स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठले ९० औँ मिनेटमा उत्कृष्ट गोल गर्दै नेपाललाई सेमीफाइनलमा पुर्याएका हुन । आजको खेलमा बंगलादेशलाई हराउनै पर्ने भएकाले पनि नेपाल दबाबमा थियो । डिफेन्स, मिडफिल्ड र फरवार्डमा राम्रो तालमेल मिलाएको नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हो ।
नेपालसँग हारेपछि बंगलादेश भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । नेपाल र पाकिस्तान भने सेमीफाइनल प्रवेश गरेका छन ।